Invest Myanmar Summit 2019 တွင် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၁၂ဝဝ ကျော် တက်ရောက်လာခြင်းမှာ ဒါဗို့စ် ကမ္ဘာ့?? - Yangon Media Group
Invest Myanmar Summit 2019 တွင် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၁၂ဝဝ ကျော် တက်ရောက်လာခြင်းမှာ ဒါဗို့စ် ကမ္ဘာ့??
Invest Myanmar Summit 2019 တွင် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၁၂ဝဝ ကျော်အထိ တက်ရောက်လာခြင်းမှာ ဒါဗို့စ်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၏ ရလဒ်ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရသည်။ ”ဒါဗို့စ်ပွဲမတိုင်ခင် အရင်က Invest Myanmar Summit 2019 မှာ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ တက်ရောက်ဖို့ စာရင်းပေးတာ ၈ဝဝ လောက်ပဲရှိခဲ့တယ်။ ဒါဗို့စ်ကမ္ဘာ့စီး ပွားရေးဖိုရမ်ပွဲအပြီးမှာ ပြင်သစ်တွေ ရော၊ ကိုရီးယားတွေပါ နိုင်ငံ တကာက တစ်ပြုံကြီး စိတ်ဝင်စားလာပြီး စာရင်းပေးကြတာ ၁၂ဝဝ ကျော်ထိ ရောက်ရှိသွားပါတယ်”ဟု ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံမှူးကြီးက ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်တွင်ပြောသည်။
Invest Myanmar Summit 2019 ကို နေပြည်တော်ရှိြှုဃဃ ၂ တွင် ဇန်နဝါရီ ၂၈ နှင့် ၂၉ ရက်တို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဒါဗို့စ်မြို့၌ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်မှ ၂၅ ရက် အထိကျင်းပခဲ့သည့် (၄၉) ကြိမ် မြောက် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးသို့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံမှ ဆောင်ရွက်နေသည့် ပြု ပြင် ပြောင်းလဲမှုများ၊ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများအား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ တက် ရောက်လာကြသည့် အစိုးရအကြီးအကဲများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ထိပ်တန်းစီးပွား ရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် တွေ့ ဆုံအသိပေး ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရခိုင်အရေး ကြောင့် နိုင်ငံတကာဖိအားတွေ အများကြီးခံနေရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်းက နိုင်ငံတကာအကြီးအကဲတွေကို ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ ရခိုင်ပြည် နယ်ဟာ မြို့နယ် ၁၇ မြို့နယ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ အဲဒီမှာ တကယ် ပြဿနာတက်နေတဲ့ မြို့နယ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်က သုံးမြို့ နယ်ပဲရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ မြို့နယ် ၁၃ မြို့နယ်မှာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ အခုအချိန်ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရင်း နှီးမြှုပ်နှံဖို့ အချိန်ပါပဲလို့ပြောတော့ နိုင်ငံတကာလူတွေက သူ့စကား ကြားပြီး အရမ်းစိတ်ဝင်တစားရှိလာတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယင်းအပြင် နိုင်ငံတကာရင်း နှီးမြှုပ်နှံသူများ Invest Myanmar Summit 2019 သို့ တက်ရောက်နိုင် ရေး ဗီဇာအလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးများက ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ဒါဗို့စ် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်တွင် ဦးသောင်းထွန်း ဦးဆောင် သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်များက မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိန်ခေါ်မှုအချို့ ရှိနေသေးသော်လည်း နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများ လာ ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အခွင့်အလမ်းကောင်း မြောက်မြားစွာရှိနေ ခြင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း ဖန်တီး နေခြင်း၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု သွက်လက်မြန်ဆန်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်နေခြင်းတို့ကို နိုင်ငံတကာ ထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံ အသိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
'မုန်းစွဲ' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အောင်ပွဲအနေဖြင့် 'အရှင်ဆန္ဒာဓိက' တရားပွဲ ရွှေထွဋ်တင်ဝင်းတွင် က??
မုဒုံမြို့နယ် ကမာဝက်မြို့ သိမ်ကုန်းရပ်ကွက်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တံတားမြို့နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးန?
တက္ကစီ ယာဉ်ပေါ်တွင် မေ့ကျန်ခဲ့သည့် ငွေကျပ်သိန်း ၃ဝ နှင့် လက်ဝတ်ရတနာများကို တက္ကစီယာဉ်မောင်းက
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မြင့်တက်လာစေရေး စကားဝိုင်းဆွေ?